Basa reoetereter muApple Watch raigona kufambiswa | Ndinobva mac
Basa reoetereter paApple Watch rinogona kufambiswa mberi
Apple ine akati wandei mapurojekiti mupfungwa yeiyo ingangove yakanyanya smart smart pamusika. Isu takaverenga nezve mukana wekuti kuona kuti tiri kunyura kana kuti nzvenga kuvhunduka. Iye zvino Apple inogona kuunza mashandiro e kuverenga oxygen (oximeter) muropa. Isu taigona kukuona munguva pfupi nekuda kwekonavirus.
Basa reoetereter rinogona kunge richiuya nekukurumidza nekuda kwekoronavirus.
Apple yanga ichifunga nezvekushandisa nyowani hutano paApple Watch kwenguva yakati. Inogona kuburitsa kuverenga kweropa okisijeni uye nekudaro kubatsira mushandisi wayo kuongorora mamiriro avo ehutano imwe yakakwana nzira.
Nekuda kwekonavirus, Apple aigona kupfuura tangisa basa iri. Chimwe chezviratidzo zvehutachiona ndechekuti chinokonzeresa kufema uye nzira yekuzvidzora, pakati pevamwe, iko kuzadza kweoksijeni muropa kunoyerengwa neoximeter.
Nenzira iyi Apple Yekuteedzana 6 inogona kusanganisira basa reichi chiyero. Mukutaura yaive yakagadzirirwa avo vatambi vanoda kutonga kwakanyanya kwezviitiko zvavo zvemitambo. Asi sezvatakambotaura, dambudziko rekononavirus rinogona kuita kuti Apple ifambire mberi nekubatanidzwa kweichi chiitiko.
Saka iwe unogona kuverenga paTwitter yeimwe yevaongorori veApple nekuvimbika kukuru, unogona kuverenga iyo mabasa iyo inogona kusanganisa iyo Apple Watch nhevedzano 6, kunze kweizvi zvatotaurwa.
ZVINOKOSHA kusvetuka nezve iri kuuya #AppleWatch Zvinyorwa zve6.
💤 Kurara Kutevera
Hurefu Hupenyu hweBhatiri
6️ SXNUMX Chip
Health Utano Hwepfungwa Kuona Kusanzwisisika
Gara wakagadzirirwa zvimwe. pic.twitter.com/fN0j6xmOMA
- Nikias Molina @ (@NikiasMolina) April 30, 2020
Chinhu chakachengetedzeka ndechekuti mashandiro aya haasarame kune akateedzana matanhatu, asi zviri izvo zviri software kuitiswa, nekuti muIOS 14 kwaive kwatove nezvimwe zvinongedzo kune uku kushanda kweawa.
Ngatitarisirei kuti zvakadaro, nekuti chero kuvandudzwa kweawa iri software kunoreva kuti inogona kusvika kune vashandisi vakawanda uye wachi haisi imwe yeaya madhizagi anofanira kuchinjwa gore rega.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Basa reoetereter paApple Watch rinogona kufambiswa mberi
Apple inokutendera kuti usabhadhare maMay mhosva yeApple Kadhi
AirPods makuhwa, vhura Apple chitoro uye zvimwe zvakawanda. Zvakanakisa zvevhiki ndiri kubva kuMac